Ngaba i-DriverPack yintsholongwane? - Iifayile
Eyona > Iifayile > Ngaba indawo yokuqhuba ikhuselekile-isisombululo esinokubakho
Ngaba i-DriverPack yintsholongwane?
UmqhubiPackayisiyiintsholongwane, kodwa uhlaziye umqhubi ozenzekelayo, kwaye njengoko ufundile, uninzi lwezi zinto zinokuba malware kuyo yonke into ngaphandle kobuchwephesha.5 ngoMatshi. 2019
Ikhompyuter yakho inezixhobo ezahlukeneyo ezakhelwe kwizinto ezifana nekhadi lemizobo, iaudiyo, iWiFi, kunye nekhamera yewebhu. Zonke ezi zinto zifuna umqhubi weWindows ukuba azisebenzise. Ingxaki ngabaqhubi ifana nenye isoftware kwikhompyuter yakho inokuqulatha iibugs zesoftware kunye nokukhuseleka kwezokhuseleko ekufuneka zitshintshwe amaxesha ngamaxesha ukuze abantu abenza abaqhubi bathumele uhlaziyo amaxesha ngamaxesha Kukho iindlela ezininzi onokuthi Ukuhlaziya abaqhubi bakho ndiza kuqala ndikubonise ezona ndlela zilula zekhompyuter yakho zokuhlaziya abaqhubi bekhompyuter yakho ngokuzenzekelayo kwaye kamva ndiza kukubonisa iindlela zendlela onokukhetha ngayo umqhubi oyifunayo, kodwa isilumkiso: kukho indlela yokuhlaziya eyakho Abaqhubi nabo bahlaziya ukuba ngokuqinisekileyo akufuneki ukuba uyisebenzise kwaye olu luhlobo lwesoftware yorhwebo ezibiza ngokuba ngabaqhubi beenkcukacha ezixabisa imali kwaye zikuxelele ukuba uya kubagcina bonke abaqhubi bakho behlaziyiwe, kodwa eyona nto iyenza kakuhle le nto yiWindows , kodwa ibaliwe kwaye imbi kunazo zonke ezinye zezi nkqubo ndilapha, awazi ukuba iyakuba yintsholongwane okanye i-malware okanye nantoni na enjalo.
Ke hlala kude kwezi nkqubo zokuhlaziya umqhubi ngaphambi kokuba siqale, yazi nje ukuba abaqhubi banokungahambi kakuhle ngamanye amaxesha, akwenzeki rhoqo, kodwa kunokwenzeka ukufaka umqhubi oza kuphazamisa ikhompyuter yakho. Kuya kufuneka ukwazi ukusebenza kwakhona kwikhompyuter yakho kwaye uhambise umqhubi, kodwa xa kunokwenzeka ungene engxakini, ndifuna ukuqinisekisa ukuba unogcino lwedatha ebalulekileyo kwikhompyuter yakho ngaphambi kokuba siqale Ngendlela yokuqala yokuya hlaziya abaqhubi bakho, kwaye leyo yiWindowsUpdate nayo Windows 10, iikhompyuter zakho kufuneka zihlaziye abaqhubi bakho ngendlela efanayo ebonelela ngohlaziyo lweWindows. Siyabona ukuba kwenzeka phi le nto ukuqala emva koko uye kuseto kwaye Hlaziya kunye noKhuseleko emva koko uqiniseke ukuba ukhona Uhlaziyo lweWindows ngasekhohlo uza kubona lonke uhlaziyo olukhoyo lweWindows apha kwaye ngamanye amaxesha uyakubona uhlaziyo lomqhubi malunga nohlaziyo y uyabona apha, iya kukhutshelwa kwaye ifakwe ngokuzenzekelayo, kodwa ungayikhawulezisa inkqubo ukuba ubona iqhosha lokukhuphela apha, cofa kulo kwaye uhlaziyo luya kukhutshelwa kwaye lufakwe kwangoko.
Esi sikrini siyindlela enhle yokubona ukuhlaziywa komqhubi wakho, ukuba ngabaqhubi bakho kwenzeka ngoko kufuneka ukhangele kwiMphathi weDivayisi. Umphathi wedivayisi yindawo kwiWindows apho unokubona uluhlu lwazo zonke izixhobo kwikhompyuter yakho kwaye ubone ukuba zeziphi abaqhubi ezifakiweyo kwaye ungazihlaziya ezi ziqhubi masijonge umphathi wesixhobo ekunene nqakraza kwi icon yokuqala kwaye ucofe umphathi wesixhobo Uza kubona zonke izixhobo kwikhompyuter yakho zihlelwe ngokwamacandelo ahlukeneyo njengamakhadi wenqaku kunye neeadaptha zenethiwekhi onokucofa utolo oluncinci ukuze wandise udidi ukuze ubone izixhobo ozibonayo Yenza kunye neModeli kwisixhobo ngasinye Ngoku ungacofa kabini kwisixhobo ukuze jonga iipropathi zayo kwaye ukuba ucofa kwithebhu yoMqhubi apha ngasentla ungabona umhla okhutshwe ngawo uMlambo kunye nenombolo yenguqulo kwaye ucofe uqhuba ucofa uHlaziyo ukuze ubone ukuba ngaba uhlobo olutsha luyafumaneka kwi-Intanethi. Ukuba ingxelo entsha iyafumaneka iya kukhutshelwa kwaye ifakwe ngokuzenzekelayo.
Ngamanye amaxesha abaphathi bezixhobo baya kukuxelela ukuba ungoyena mqhubi ubalaseleyo ufumanekayo, kodwa ungazi ukuba kukho umqhubi omtsha kwenye indawo. Ukuba le ndlela ayisebenzi kuwe, uya kudinga ezinye iindlela ezixoxwe kamva kweli nqaku. Ewe, sikwiipropathi zesixhobo.
Ungabuyela kuhlobo lwangaphambili lomqhubi Umqhubi ndicofa ku Cwangcisa kwakhona umqhubi Ngokwesiqhelo ungakwenza oku ukuba unengxaki emva kokuba umqhubi ehlaziyiwe kwaye ufuna ukubuyela kumqhubi obukade unawo phambi kokuba le skrini ikubuze ukuba Uqinisekile kwaye angathanda ukwazi ukuba kutheni ungabuyela umva kwaye uthi ewe apha kodwa ndiza kuthi hayi okwangoku umphathi wesixhobo yeyona ndlela ilungileyo yokubona abaqhubi abanokuthi sele befakelwe kwikhompyuter yakho Bazihlaziya nabo, kodwa apho yindlela engcono yokuhlaziya abaqhubi bakho kwaye kukusebenzisa isixhobo sokuhlaziya esifakelwe ngumenzi kwikhompyuter yakho. Uhlaziyo lwe-Anydriver lukhona kwaye luyakufakela ukuba unakho umzekelo ukuba unekhompyuter ye-dell emva koko inokuza nesicelo sokuhlaziya i-dell ndinekhompyuter ye-hp kwaye yeza ne-HP Support Assistant, ejikelezayo I-icon eluhlaza okwesibhakabhaka enophawu lombuzo, xa ndiyicofa iyavula. Xa ufaka uMncedisi weNkxaso yeHP, uyabona ukuba iyazi ngqo ukuba yeyiphi ikhompyuter endinayo, kwaye ndingacofa uhlaziyo ukubona ukuba akukho zibuyekezo zikhoyo.
Oku kundivumela ukuba ndikhuphele kulo lonke uhlaziyo lomqhubi kwaye ndilufakele kum Kuya kufuneka ufumanise ukuba esi sixhobo sithembekile kunomphathi wesixhobo kuba uhlaziyo luza ngqo kumvelisi, ke uya kubafumana kwakamsinya nje ukuba zifumaneke umshicileli onokuba noncedo lwayo lohlaziyo olufakelweyo. Ke ukuba unomshicileli we-Epson, umzekelo, jonga into eluncedo kwi-Epson kwikhompyuter yakho eya kukuhlaziya abaqhubi bakho.
Ayingabo bonke abavelisi beekhompyuter abanikezela ngesixhobo sokuhlaziya esinjengale bendikubonisile yona, kodwa uninzi lwabenzi kufuneka babe newebhusayithi apho unokuzikhuphelela khona abaqhubi. Kwicandelo elilandelayo, ndiza kukubonisa ukuba ungayenza njani ukuze ufike kwiwebhusayithi ye-HP eyi-HP Comm. Iiwebhsayithi zeNostudies zakhiwe ngendlela efanayo.
Kuya kufuneka uye kwindawo yenkxaso kwaye ujonge abaqhubi. Ngoku kufuneka sichonge imodeli yekhompyuter yam ukuze ndikwazi ukufumana abaqhubi abachanekileyo ukuze ndikwazi ukukhetha ilaptop kwaye ungafaka inombolo yesiriyeli okanye inombolo yomzekelo apha kodwa ndiza kukhetha olo khetho ukuze i-HP ibone imveliso yakho, ngoku banemodeli yam eyafunyanwa kunye nendlela yokukhetha uluhlu lwabo bonke abaqhubi abafumanekayo kwikhompyuter yam.Xa ndikhetha umqhubi wemizobo ndingabona inombolo yenguqulo kunye nomhla wokukhutshwa kwaye ndikhuphele umqhubi ndingafumana ezinye iinkcukacha malunga nomqhubi kunye Ngamanye amaxesha kukho uluhlu loPhuculo olwenziwe kuhlobo ngalunye Ukuba awukwazi ukufumana umqhubi omfunayo kwiwebhusayithi yomenzi wekhompyuter, kuya kufuneka ukhangele umenzi wezixhobo kwiwebhusayithi endaweni yoko. Masijonge ngoku ngoku.
Masithi ndikhangela umqhubi we-Intel HD Graphics eyakhiwe kwiLaptop yam ye-HP, sele ndikhangele iwebhusayithi ye-HP kuba abaqhubi ababenzileyo baya kuba bespoke kwilaptop yam, ke ndiyazi ukuba ndingenza Amathuba ngakumbi kodwa masithi ndizamile kwaye ndinemicimbi ngalo mqhubi Eyona ndawo ilungileyo iya kuba yiwebhusayithi ye-Intel ke yiya kwiwebhusayithi ye-Intel okanye nabani na owenza isixhobo kwaye ajonge igama lesixhobo. Nazi iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo kumqhubi endimfunayo, unokukhuphela umqhubi apha, kodwa kukho isaziso kule webhusayithi ukuba kungangcono ufumane umqhubi ngqo kumenzi wekhompyuter yakho. Ke ungazama ngenene kwaye uzame iinguqulelo ezahlukeneyo zomqhubi kwaye ubone ukuba yeyiphi eyona nto ikulungeleyo kwaye ikho enye indawo yokukhuphela abaqhubi kuyo kwaye iza isangqa esipheleleyo kuba siza kujonga iwebhusayithi yeMicrosoft yeMicrosoft. iwebhusayithi egcina bonke abaqhubi abangena kwiWindows yohlaziyo lwewebhu kwinkcazo yeli nqaku kwaye ndiza kuthi kuhlala kungcono ukuzama ukuqhuba umqhubi wekhompyuter yakho kuqala, kodwa le yeyona webhusayithi ibalaseleyo ukuba unganamathela, konke onako ukwenza kukukhangela umqhubi omfunayo, uya kubona iziphumo ezininzi, kodwa ukuba ujonga kwezi uzakufumanisa ukuba uninzi lwala manyelo ayaphindwa.
Umahluko ophambili kukuba kuya kufuneka unike ingqalelo umhla opapashwe ngawo umqhubi kunye neenombolo zenguqulo, unokucofa uKhuphelo emva koko ukhuphele umqhubi. Xa ukhuphela umqhubi kwiKhathalogu yokuHlaziya yeMicrosoft, ihanjiswa kwifomathi yekhabhathi. Eyona ndlela ilula yokuphatha ifayile yeDot Cab kukuyivula kwaye ukhethe zonke iifayile kwaye uye kukopa uze uphume apha kwaye wenze ifolda entsha kwenye indawo njengakwidesktop yakho ngoku ungene kwifolda kwaye ucofe, Kuya kufuneka ulinde ngelixa zonke iifayile zincanyathisiwe emva koko wenze inqaku lokuba ikuphi le folda kuba siza kuyifumana kungekudala xa siyifuna ukuvula umphathi wesixhobo, cofa ekunene kwimenyu yokuQala kwaye ucofe kuMlawuli weSixhobo.
Ngoku fumana isixhobo osifaka kumqhubi, cofa ekunene kwisixhobo kwaye ucofe kuHlaziya uMqhubi. Cofa kuKhangela ikhompyuter yam kwaye ufumane ifolda esiyenzileyo emva koko ucofe u-Okulandelayo kunye noMphathi weDivayisi kufuneka akwazi ukwenza konke ukuze uhlaziye abaqhubi kwikhompyuter yakho ngeendlela ezintandathu ezinazo kubo ukufaneleka kwabo kuHlaziyo lweWindows yeWindows rhoqo. Umphathi weDivayisi ukukwazisa oko kufakelweyo, kwaye unokuhlaziya abaqhubi kwaye uye kwiwebhusayithi yomenzi.
UMvelisi weeNkonzo uza kukwazisa ukuba ngaba umenzi ukhuphe abaqhubi abafanelekileyo kwisixhobo sakho kwaye ukuba unako. Ukuba awukwazi ukufumana abaqhubi obulindayo, unayo iwebhusayithi yomenzi kunye newebhusayithi yeMicrosoft. Ngaba uye wanceda ukuvuselela abaqhubi kwikhompyuter yakho? Nceda undazise kwizimvo ezingezantsi ukuba uhleli njani kwaye ukuba ulifumene eli nqaku liluncedo.Sicela unike izithupha zakho ukuba ufuna ukubona ezinye iitutorial ezivela kum kwixesha elizayo, cofa kubuso bam obungezantsi kwaye ucofe ebomvu Bhalisa - Iqhosha
Ngaba kukho uhlaziyo lomqhubi okhuselekileyo?
Ngokubanzi, asikukhuthazi ukuhlaziya izixhobo zekhompyuthaabaqhubiNgaphandle kokuba unesizathu soku.UmqhubiyeiUmfundi wekhadi le-SD oza kwakhiwa kwikhompyuter yakho mhlawumbi ulungile. Nokuba kuiumenzi unikezela ngenguqu entsha, ngekhe uqapheleiUmahluko.12 ngov. Ngo-2018
Ndisikhupha njani isisombululo seDriverPack?
Windows Yongeza /SusaIinkqubo zibonelela abasebenzisi ngendlelakhiphaInkqubo kunye neNkqubo nganye yokuSebenza ine-Add /SusaIinkqubo zibonisa.
KhangelaIsisombululo seDriverPack11.8 R234 kwaye ucofe kuTshintsha /Susaukuyakhiphainkqubo.
* FumanaIsisombululo seDriverPack11.8 R234 ifolda kwaye ucofe kwi-Uninstaller yayo.
Yintoni i-DriverPack 17 kwi-Intanethi?
Inqanaba lomsebenzisi. Khuphela uguqulelo lwamva nje. Isibuyekezo sokuqhuba simahla sePC.UmqhubiPackIsisombululo sisixhobo sasimahla eskena i-PC yakho ukuhambisa abaqhubi abafanelekileyo ukuba ubanike.UmqhubiPackiya kukunika iinkqubo zokufaka endaweni emva kokuba isoftware ichonge abaqhubi abalahlekileyo nabaphelelwe lixesha.Julayi 3 2020
Ngaba kukhuselekile ukukhuphela isisombululo sedrivepack?
Kwaye kukhuselekile ngokugqibeleleyo ukuba uyikhuphele kwindawo efanelekileyo, apho kungekho mathuba efayile ethintwayo. Ungayikhuphela ngokulula apha. Ngaba iDrivePack Solution Legit? Ukungathethi, uninzi lwabasebenzisi luyayikhetha ngaphezu kwalo naluphi na olunye uhlobo lweapps zokuhlaziya abaqhubi babo ngenxa yeempawu zayo.
Ngaba kunokwenzeka ukufaka ipakethe yokuqhuba ngesiRashiya?
Ke iqhinga ngeSisombululo seDrivePack kukufaka kuphela abaqhubi, kuba isoftware iphuculwe eRashiya, kwaye ngenxa yoko uhlaziyo lwesoftware olunikezelwayo luya kuba ngesiRashiya. Abaqhubi balungile nangona kunjalo, ndiyisebenzise kaninzi, abaqhubi kuphela, kwaye ndinemicimbi zero!
Luhlobo luni lwentsholongwane oluyi-driverpack 17 kwi-intanethi?
Isisombululo se-DriverPack (i-DriverPack-17-Online.exe) ivavanywe ngokuzimeleyo nguKaspersky. Iqela labo alijongi isisombululo seDrivePack njengekhohlakeleyo kodwa sisixhobo nje esinotyikityo olukrokrisayo. Iinkqubo ze-antivirus esasizisebenzisa ukuvavanya le fayile zibonise ukuba ayinasoftware, i-spyware, i-trojans, iintshulube okanye ezinye iintlobo zentsholongwane.
Ngaba usebenzisa izisombululo zediski zokuqhuba rhoqo?
I-Malwarebytes isuse ii-PUP ezingama-91 kwinkampani, kodwa iskena se-rootkit kunye nexesha lokuvavanywa kwexesha lika-Avast alifumananga nto. Emva koko ndisebenzise 'Yonke into' kwaye ndafumana iimeko ezintathu zeefayile zeDrivePack. Ke ndiza kuzama ukuzicima kwiLinux. Kwakhona, okokuqala kokukhathazeka kwam ukuba le yinkampani yaseRussia. Kwanele ngoku. Ngaba usebenzisa i-disk imaging rhoqo?